Iri Zano Rakanakisa reKutengeserana Kutaurirana kweVaridzi Vemabhizinesi. Zvaunoda kuziva. 0000
Iri Zano Rakanakisa reKutengeserana Kutaurirana kweVaridzi Vemabhizinesi. Zvaunoda kuziva.
Leave a Comment	/ Vatsigiri, Blog, Bhizimisi Mutemo / By Sarah
Chii chinonzi Kutengeserana kupokana kune Varidzi veMabhizinesi muDubai?
Mediation yekutengeserana kune bhizinesi ndipo apo mapato maviri kana anopfuura anogona kugadzirisa kusawirirana kwekutengeserana kuburikidza nemuyananisi vakabvumirana. Maitiro aya anoponesa nguva nemitengo nekudzivirira matare, haana mvumo yepamutemo muNorth Carolina, asi inopa chengetedzo yepamutemo kune ese mapato anobatanidzwa. Kunyangwe iwe uri muridzi webhizinesi kana mushandi ari kutsvaga kugadzirisa gakava, iwe unofanirwa kunzwisisa zvakanakira kuyananisa kwekutengeserana kune rako bhizinesi uye kuti zvingabatsira sei kudzivirira kambani yako.
Mediation yekutengeserana inzira yekutaurirana yekuzvidira pakati pemapato ari pasi pekutarisirwa kana kuperekedzwa neasina kwazvakarerekera wechitatu anonzi muyananisi. Murevereri kuti agadzirise gadziriro yekugadzirisa inofanira kunge isina rusarura uye chinangwa chekusvika pamutongo wakaenzana. Chibvumirano chakagadziriswa pasi pekutaurirana chinozogamuchirwa nemapato.
Muzviitiko zvakawanda, mumhuri, kambani, kana musangano, vanhu vanowanzowira mukati makakava kana kutengeserana marimendi pane imwe nguva muhupenyu hwavo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Vanhu vazhinji vachatsvaga rairo yetimu yavo yepamutemo uye vovatendera kuti vagadzirise nyaya iyi. Kunyangwe mari inodhura yemutemo ichiperekedza kubvunzana, zvinogona kutungamira kune akawanda akanaka marefu mhinduro, chinova chikamu cheicho che kutengeserana pakutaurirana. Kupindirana kunogona kugadzirisa matambudziko sekuramwa mabasa, kupesana kwezvematongerwo enyika mumasangano akasiyana. Murudzi rwakamisikidzwa, kupindirana kwekutengeserana kunobata nyaya dzine chipingamupinyi pamabasa ezuva nezuva.
Kupindirana kwekutengeserana inzira yekutaurirana yekuzvidira pakati pemapato pasi pekutarisirwa kwemuyananisi.
Mediation inobvumidza mapato maviri kuti ataure kuburikidza nekusiyana kwavo mune yakadzorwa mamiriro nerubatsiro rwevagadziri vakarovedzwa uye kusvika pamhedzisiro inobatsira. Kuti uve neyakanakisisa yekutengeserana, unofanirwa kutsvaga gweta rakanakisa rekumiririra matambudziko ako uye kumhanyisa maitiro ese. Gweta rinofanirwa kubatsira nenyaya ipi neipi ine chekuita nehukama inogona kumuka, vashandi vane hasha, uye dzimwe nharo mubhizinesi renyika.
Gweta rakakura rinofanirwa kuve nehunyanzvi hunodiwa kuti vagadzirise nyaya dzakaomesa kambani kana bhizinesi. Gweta rinofanirwa kuve nehunyanzvi hwekuronga bhizinesi kubatsira mumwe kusarudza kuti aumbe kambani inezvikwereti zvishoma kana kambani. Izvi zvakakosha mukukubatsira kuronga bhizinesi rako uye kuzadza mapepa anodiwa anodiwa.
Gweta rinofanira kuva nezvibvumirano zvinozomubatsira kuti anzwisise bhizinesi rako zvakanaka. Anofanirwa kubuda nemhinduro uye nhanho dzakakodzera kutevedzera kusimudzira bhizinesi rako. Pamberi pekutaurirana kwekutengeserana, gweta rinofanirwa kugadzirira zviyero zvemafomu zvakafanira kune vatengi, vanotengesa, uye vatengi kugadzirisa gakava sezvavanobuda.
Gweta rinofanira kukubatsira kunyoresa masevhisi ako uye zvigadzirwa zvekuchengetedzwa kwekopiraiti kana zvikwangwani zvehurumende zvinodiwa kugadzirisa makakatanwa. Anofanirwa zvakare kunyoresa kambani kune manhamba ekuzivisa emutero uye anzwisise mhedzisiro yemutero yerudzi rwebhizinesi raunobata kuti ugadzire hwaro hwakakodzera hweakaunzi yako. Gweta rinofanira kuziva nezve real estate iyo ingangoda yakawanda yakanaka kudhinda nemasaini.
Mukudyidzana kwekutengeserana, iwe unofanirwa kusarudza nyanzvi ine ruzivo mukati kubata nyaya dzekutengesa. Anofanirwa kunge akabata nevamwe vatengi kuziva kwavo kwakasiyana nzvimbo dzekufarira kuchengetedza zvese zvichimhanya kana zvasvika pakubata nenyaya yepamutemo iri mumaoko kudzivirira kukanganisa. Gweta rakanaka rebhizinesi richabatsira bhizinesi rako kuti ribudirire uye kubatsira vashandirwi vako kudzivirira nyaya dzemutemo dzinogona kudhurira munhu kuve nematare edzimhosva kana kuyananisa kwekutengeserana.
Mamwe mabhenefiti ekutsvaga kutaurirana kwe bhizinesi rako anosanganisira:
Mediation yekutengeserana inodhura.
Kuremedza kutengeserana kwakanyanya kudhura zvakanyanya kana tichienzanisa nemutemo wedare. Mari yekudyidzana kwekutengeserana inoenderana nezvinhu zvakaita sekudiwa kwemutengi, nzvimbo, hunyanzvi, uye ruzivo rwakatorwa kubva munzvimbo dzakasiyana dzemutemo. Mune zviri pamutemo
Gadzira dare, uye mari yekutonga yakanyanya kwazvo kana ichienzaniswa nekurevererwa. Saka muyananisi wezvekutengesa unodhura, uye matambudziko ako anogadziriswa zvakanaka nehunyanzvi.
Mediation inogadzira nharaunda umo Mapato anoshingairira kutora chikamu
Sezvo kureverera iri imwe yemamodhi ekugadzirisa kusawirirana, hapana mutemo wakatarwa muUAE unogadzirisa maitiro ekupindirana. Mapato ekutaurirana ane mukana wekuti vataure zvavanofunga nezvenyaya nemurevereri asingasaruri. Zvakare, mapato anogona kuendesa zvido zvavo pasina kufungira panguva imwe chete.
Mediation inoita kuchengetedza nguva.
Tichifunga nezvemaitiro akaoma edare, zvinotora nguva yakareba kuti dare ritonge matambudziko emakambani akasiyana. Kune huwandu hwakawedzera hwemakakatanwa emhuri nemakambani mumatare nhasi anoramba asina kugadziriswa kwemakumi emakore. Iyo yekumirira nguva mukutengeserana kwekutengeserana yakanyanya kushoma, iine mukana wakakura kwazvo wekuuya muchibvumirano cherunyararo. Kupindirana kwekutengeserana kunotsigira chibvumirano chinoshanda uye chinogara kwenguva refu.
Iyo inogadzira hukama hwakareba-nguva.
Kunyangwe kuri kugadzirisa mhuri, kubasa, kana kupokana kwevanhu kuburikidza nedare redzimhosva, maitiro acho anogara achiguma achikanganisa hukama pakati pemapato maviri. Izvi zvinodaro nekuti bato rega rega rine maonero avo akasiyana, uye mhedzisiro yedare inogona kutsigira rumwe rutivi, zvichikonzera kusawirirana kukuru pakati pavo. Asi mune zvekushambadzira zvekuyananisa masevhisi, mapato maviri anogona kutaura zvichemo zvavo zvine chiremerera uye zvinoreva kuti pane mikana yekuti vachengetedze hukama kana kugadzira imwe kana gadziriro yacho yagadziriswa. Inopa mukana wekuchengetedza chero zvakanaka pakati pemapato maviri aya.
Kuita kwekudyidzana kwekutengeserana kunoitwa nekukasira uye nekuchinjika sezvo mapato anogona kusarudza pamunhu kuti ave murevereri nenzvimbo yekureverera. Nekwaniso yekusarudza, mapato anogona kutora munhu ane ruzivo rwehunyanzvi nezve kubatwa. Hunhu hwekutengeserana hwekudyidzana hwakagadzirirwa kusimudzira nekusimudzira hukama kuti mapato maviri abatsirwe. Kazhinji, kupindirana kwekutengeserana kunokonzera kuparara kushoma kune kunetseka kwebato. Maitiro acho akavanzika kune vese mapato.
Mediation yekutengeserana yebhizinesi inokurumidza, ine mari, yakavanzika, uye inochinja. zvinogona kutungamira kupfungwa dzinoverengeka uye nzira dzekugadzira dzekugadzirisa kusawirirana; mapato acho anochengeta chiyero chakakura chekubatanidzwa zvakananga mumakakatanwa, nekudaro vachidzora maitiro ekugadzirisa mhedzisiro yedambudziko ravo. Inogona kurongedzwa mukati memazuva kana mavhiki zvichienderana nemaitiro; kupindirana kwekutengeserana kunoonekwa nehuwandu hweruzivo rwunosiyana kubva kune imwe nyaya kuenda pane imwe.